Le filimu "uJezabeli" (ukubuyekezwa okuyizinto luphambene) - a Thriller oluxube Thriller imfundamakhwela umqondisi Kevin Grotert (ex-umqondisi akukhuthazwa Franchise "Saw"). Le filimu kusekelwe simo screenwriter Robert Ben Garant ( "Ebusuku Museum," "isihogo Baby").
Umhleli abanolwazi futhi ethandwa, master of izikebhe wakhe Kevin Grotert wanquma uqeqeshe njengomqondisi ekupheleni le senkulungwane ezimbili. Nakuba abadali horror uchungechunge "Saw" nesibindi ukuze umethembe nge ekwakhiweni ezimbili zokugcina izingxenye Franchise - the yesithupha neyesikhombisa, njengoba ukukhwezwa izingxenye odlule (ngowokuqala lesihlanu). Donsa Saga abesabekayo yokujama tsi umqondisi wahluleka, kodwa ubuso ku ukungcola asisho shaya, futhi ngemva kokuphela "Saw" akazange adikibale ukuqondisa Kunalokho, ngemvume, phakathi kokunye, isivumelwano ne studio ka Jason Bloom Blumhouse, okuyinto wadala "u-Izebeli." Izibuyekezo yomsebenzi wakhe ubulokhu impikiswano, kuhlanganise okungekuhle.
Zama indaba kahle ukugqokwa
Ukuzama ex-umhleli edumile horror Franchise "Saw" yaphenduka indaba eziyingqayizivele indaba kahle ukugqokwa mayelana "isipoki endlini" akuphumelelanga, kodwa awukwazi ukuyibiza ngokuphelele kuhlulekile kakhulu. Kubonakala sengathi, ukuthatha "uJezabeli" (Abagxeki Izibuyekezo uqinisekise leli qiniso), waqonda ku ezindlebeni shí ujabule, okuyinto wazama bayozama, enikeza umbukeli sincumo ezingalindelekile kubo iqaliswe izindaba. Esikhathini ifilimu, akukho izigcawu olunegazi futhi horror amakhaza, esikhundleni yonke le licace kakhudlwana ngifuna ngokuningiliziwe nobuhlungu engqondweni Heroine, okwamanje wasimama ngozi ethukile ukufa khona ukhonkolo ezithile. Noma kunjalo, ifilimu "uJezabeli" horror uqhosha nomkhathi wawo eliyingozi, nakuba lokhu kuye kwasiza Grotert imvelo njengoba emaxhaphozini nakanjani ungenalo kumnandi ukukhanya ezithandayo. Futhi izinhlamvu movie kude omuhle.
Ukuqiniseka udibi ukubhoboza
Alas, i- "uJezabeli" a baxgeki bengekho laudatory. Okuhle mayelana a baxgeki ifilimu bathi zincane kunaloko phezu engxenyeni yokugcina "Saw", Grotert usolwa ngokunukubeza ngokweqile ukuzethemba futhi enokholo oluqinile, washo e udibi Ukubhoboza twist yokugcina ifilimu. Ochwepheshe abenzi mafilimu, angazanga ukuthi uchaza akazami ukuba bavuselele isithakazelo, "ukubungaza" izethameli ngesikhathi njalo kubalwe ifilimu "u-Izebeli." Izibuyekezo imakwe Eqinisweni esidabukisayo - esikhundleni uhlobo bendabuko ukuhlangana okubi futhi ngokulinganayo basakaza phezu ngesakhiwo zezikhathi ezijabulisayo ukubukela nolwelwe wathola umndeni idrama. Bambalwa Ongoti uhlobo wayejabula lapho ebona indlela umlingisi losemcoka Jesse (Sara Snuk), zivalelwe sabakhubazekile, ubukeka video amavidyo ubudala eqoshiwe umama namanje ukhulelwe, izingxoxo ehola ngothando bobusha - Preston (Mark Webber), ezama bakhipha ndawonye indaba elibuhlungu ngokuzalwa kwakhe.
"UJezabeli," ifilimu horror has a inzuzo abahlukene - insikazi phambili solar Sarah Snook. Lo mlingisi wanquma ukulandela ezinyathelweni nabo phansi esitolo - Naomi Watts futhi Nicole Sheridan, abake ngesibindi baphuthuma kwalasha okwakwenzeka of namaqhawekazi yakhe. UBooysen wakwazi ukusho ukuthi ukudala isithombe esiphoqayo ntombazane abaphethwe ukuhlukumezeka engqondweni nasemzimbeni futhi ukuhlukunyezwa ngamandla angaphezu kwemvelo nezidalwa ngesikhathi esifanayo. Le filimu "uJezabeli" wanikeza izilaleli umhlangano Mark Webber, ngubani sibahle eduze Sara. Mark Webber kanye waphinde wabonisa efaneleyo yayo, ngemva kokuphenywa kwecala cishe owodwa handedly ukulondolozwa ukwehluleka Remake we Thriller "izono 13". A esithinta inhliziyo nokwesabekayo at eduze ngowokuqala indima yokugcina umama protagonist waya Dzhoel Karter, ubunjalo baso kungumongo esiqintini movie. "UJezabeli" izibuyekezo movie ibizwa ngokuthi umzamo bahluleka ukuba ilowo entsha Kevin Grotert Polanski, umqondisi, mhlawumbe ngisho ngokwakhe usunqumile ukuthi ncamashi kuthatha - a Thriller kwengqondo a 80s la noma horror yesimanje. Kodwa umoya viscous noSara Snook kufanele ukubonga ngobuqotho kuye.
horror "uJezabeli" ifilimu moviegoers Izibuyekezo bagxekwa ebuthaka iskripthi isakhiwo. Nakuba kulo isikhathi wazizwa khona imfihlakalo ezithile, ngasizathu simbe, asisho uvukile endaweni yayo, kwakungekho abalulekile izingxenye izingxenye. Isithombe sigcinwa nge-hhayi eyayiqhutshelwa ingaqiniseki esibi, wona akazange abangele zenkulumo okuphikelelayo imizwa - mhlawumbe ngoba umbhali Robert Ben Garant kule phrojekthi wasebenza kumafilimu umndeni efana franchise "Ebusuku Museum" futhi ifilimu animated "Mnu Peabody & Sherman." webhayisikobho yakhe befilimu "Isihogo Baby" - comedy horror - wayewukuphela kwesisebenzi eduze isihloko eshaqisayo. Mhlawumbe yingakho simo lapho ifilimu "uJezabeli" yathathwa, nje kancane ababuthakathaka, ngoba screenwriter okokuqala wasebenza umlando sina futhi egcwele inzondo. The best, yebo, woza!
Icubungula isithombe "uJezabeli", ukubuyekezwa kwe-movie, abhalwe kubantukazana elula, hhayi ochwepheshe, uyazi - iphrojekthi has zonke izimfanelo ezidingekayo eshaqisayo. Uhlamvu main njalo enviable behlupha ongaziwa, sibalo amnyama, ngimemeze ithuba kancane futhi ukuze uchithe ezandleni zakhe. Kwesinye isiqephu, uJese, futhi nalo uvalo umbukeli izithunzi Murky, ukucabanga, kanti yesehlakalo phezu Voodoo emathuneni, lapho umlingisi losemcoka nomngane bambe up futhi ngavula lomngcwabo encane, umxhwele. Kodwa ngesikhathi esifanayo umqondisi ngisho esabe esikhundleni salokho okufanele likubone, njengoba kancane kancane luyakha emkhathini okunamathelayo, ukwesaba viscous, sizungezwe emaxhaphozini black ngokuvutha kulokoza izimbaqa. "UJezabeli" Le filimu ine emkhathini, futhi impela egijima, kodwa, ngeshwa, kulesi simo lutho.
Ngeshwa, ngaleso sikhathi uhlobo horror usesimweni unenviable namanje ozithandayo, kodwa kuhle shabby futhi bakhathale a isiqondiso frazzle cinema. Kubonakala sengathi izinsuku ekhazimulayo kanye akufezile kakade emva kwethu, kodwa amathemba akuzona kamnandi. monster Kugcine umxhwele kwabanye yisakhiwo sodumo, bavele yeminyaka edlule, futhi ayebuthakathaka Brunette owesifazane Japanese ku nightgown. Uzokwenza kufanele kuphawulwe ukuthi ezinhle imidwebo - abameleli uhlobo ukuza unyaka owodwa, kodwa isimo jikelele akakwazi ukuthonya. Iningi kumabhayisikobho anamuhla kukhona iqoqo clichés owaziwa futhi wachayeka, ngaphandle kokuthi uhlamvu okwakhe, okwakhe kanye emisha.
Uhlobo clichés "uJezabeli"
Abagxeki iphuzu ifilimu izakhi ekhona movie, analogue zazo umbukeli ungacabanga amanye amaphrojekthi afanayo:
Indawo - endlini Haunted. isici ethandwa kakhulu elisetshenziswa "ukupela", "eminye", "Paranormal", "isiqalekiso" futhi t. D.
Ilungiselelo - emaxhaphozini okuyimfihlakalo Louisiana nge touch of voodoo. Kodwa uma ngibuka e "I Skeleton Khiye" futhi "Owesifazane Black 1.2".
Uhlamvu main - intombazanyana, sokuphelelwa yithemba enkulu ngesihlalo sabakhubazekile, njengasezulwini "Astral 3", "Oculus", "Ongakazalwa", njll Hhayi enhle, kodwa emnandi, abangele uzwela wesifazane amadoda - .. Isithakazelo engeli yimpumelelo futhi neckline njalo ngokujulile.
The main usongo - a elibuhlungu, imfihlo esibi kusukela esikhathini esidlule.
izinhlamvu yesibili: uyise umlingisi losemcoka - indoda engemuva yomkhumbi abadala owazi eziningi, kodwa ungatsheli; ex-lover - uyazi lutho, kodwa Uhlale ekulungele ukusiza protagonistke, akhohlwe umkakhe, umsebenzi wangaphambili futhi ukuphila njalo.
Incarnation okubi - yisithunzi - ngokungagwegwesi ukuvilapha, kubonakala cishe imizuzu engu-20, futhi isikhathi akakuthandi kangako ukungethusa umlingisi lomcoka. ubutha Active ukuthatha ezintathu kuphela, lonke khona elinganiselwe.
Ngomqondo onabile, inkulumo umqondo eshaqisayo isithombe nge dash of umphenyi umugqa kuyamangalisa, kodwa ekwenzeni lokho okuhleliwe (wabuthela kusuka izindlela neshaya izixazululo), kuhambisana "umphumela ongalindelekile" emasikweni best of uhlobo engakhulekeli i wobuciko.
Uchungechunge oluthi "Akutholakali okwesikhashana": abadlali
Thina ukuhlola ibhalansi zezimali ukuhlola isimo sezimali webhizinisi
Ihhotela Sefikbey Ihhotela 3 (Turkey, Kemer)
I okufakiwe eziphila abakhuthele (BAA)
Shampoo "Alerana" izinwele ukukhula: ukubuyekezwa odokotela, ukubunjwa, imiyalelo, izithombe, analogue
Indlela ukukhetha futhi ufake on-ebhodini kukhompyutha 2115
Iphalishi Millet phezu kwamanzi: elungiselela isidlo ewusizo